मधेशको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि देउवालाई समर्थन गरेका हौं – Sahara Times
कार्यकारिणी सदस्य, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (महन्थ ठाकुर पक्ष)
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका दुवै गुट (महन्थ ठाकुर गुट र उपेन्द्र यादव गुट) ले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेका छन् । यसअघि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अ‍ोलीलाई प्रधानमन्त्रीमा टिकाई राख्न भूमिका खेलेको महन्थ ठाकुर गुटले पनि देउवालाई समर्थन गर्नुलाई यहाँ अर्थपूर्ण रुपमा लिएको छ । विश्वासको मत लिने दिनको केही घण्टासम्म अ‍ोलीलाई समर्थन कायम राख्ने महन्थ ठाकुर गुटले एकाएक देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिको समिकरण फेरिएको हो । उपेन्द्र यादव गुटले जसपाका २० जना सांसदलाई लिएर देउवालाई समर्थन गरेको थियो भने ठाकुरसँग १२ जना मात्र बाँकी थियो ती १२ जनालाई लिएर उहाँले समर्थन गर्नुभएको हो । प्रस्तुत छ, यो कसरी सम्भव भयो, अ‍ोलीलाई किन छाड्नु भयो, अबको राजनीतिक समिकरण कस्तो हुन्छ लगायतका विषयमा सहारा टाइम्सले महन्थ ठाकुर गुटका कार्यकारिणी सदस्य शरतसिंह भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादीत अंशः
प्रतिपक्षी भूमिकामा रहनु भएका तपाईहरु प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्न किन बाध्य हुनुभयो ?
–हो, हामी प्रतिपक्षि भूमिकामा छौं तर मधेशको अधिकार, पहिचनका लागि हामीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका हौं । हामीले शेरबहादुर देउवालाई होइन सरकारलाई समर्थन गरेका हौं जुन सरकारबाट हामीले मधेशको माग पुरा हुन्छ भनि अपेक्षा गरेका छौं ।
समर्थन गर्नु अघिसम्म एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको साथमा हुनुहुन्थ्यो, विपक्षी गठबन्धन बनाउने कुरा गरिरहनु भएको थियो अचानक
देउवा नेतृत्वको सरकारले मधेशको माग पुरा गर्छ भनि थाह पाएर कसरी समर्थन गर्न पुग्नुभयो ?
–यसअािघ पनि हामीले केपी शर्मा अ‍ोलीलाई होइन, उहाँका सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं । सरकारलाई नेतृत्व गर्नुभएका केपी शर्मा अ‍ोलीले मधेशको माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो । सो प्रतिवद्धता अनुसार मधेशका केही मागहरु पुरा पनि भयो । अरु पुरा गर्ने प्रकृयामा थियो । केपी अ‍ोलीले हामीसँग गर्नुभएको प्रतिवद्धता अनुसार काम गरिरहनु भएको थियो । हामी उहाँप्रति सन्तुष्ट थियौं । उहाँ अहिले सरकारमा हुनुहुन्न, सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको छ । त्यो सरकारले मधेशका बाँकी माग पुरा गर्छ कि, ओलीले जहाँबाट काम छोड्नु भएको थियो त्यहाँबाट देउवाले सुरु गर्नुहुन्छ कि भनि हामीले अपेक्षा गर्दै प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका हौं ।
समर्थन गर्नुभन्दा एकदिन अघि केपी ओलीको निवास बालकोटमा गएर गठबन्धन बनाउने सहमति गर्नुभएको थियो, राजनीतिक गठबन्धन बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति गर्नुभएको थियो अनि कसरी एकाएक त्यो सहमतिबाट पछाडी हट्नु भयो ?
–होइन, तपाईले भनेको जस्तो कुनै सहमति भएको होइन । उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिएपछि हामी उहाँलाई भेट्न गएका हौं । उहाँलाई हाम्रो समर्थन थियो । उहाँ सरकारबाट हटेपछि भेट्नु आवश्यक देखेर हामी गएका थियौं । उहाँ सरकारमा हुँदा मधेशका लागि गर्नुभएको कामका लागि धन्यवाद दियौं । हामी राजनीतिमै छौं, बाटोमा कतै भेट भइहाल्छ भनि कुरा भयो तर त्यस्तो कुनै सहमति भएन ।
म फेरि त्यही प्रश्न गर्न चाहन्छु, देउवालाई समर्थन गर्नुभन्दा एकघण्टा अघिसम्म ओलीका साथ नछाड्ने प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्ने भनिरहनु भएको थियो तर अचानक के भयो त्यो कुरा बुझ्न खोजेको छु केही भन्न मिल्छ ?
–प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिन्छ भनि चर्चा सुरु भएको थियो तर उहाँले हामीबाट मत माग्नु भएको थिएन । र, हामीले त्यतिकै दिने कुरा थिएन । समर्थनका लागि हामीलाई कुनै आग्रह भएको थिएन । विश्वाको मतमा समर्थन गर्नुपर्छ भनि हामीसँग कसैले मत पनि मागेको थिएन । अनि हामी आफै गएर त्यतिकै मत दिने कुरा पनि थिएन त्यही भएर हामी जहाँ थियौं त्यही थियौं । त्यसपछि देउवाजीले फोन गर्नुभयो । पत्र पनि पठाउनु भयो । हामीसँग वानेश्वर संसद भवनमा वार्ता पनि गर्नुभयो । त्यसपछि मात्र हामीले समर्थनका लागि तयार भयौं ।
तपाईहरुसँग वार्ता हुँदा के के सहमति भयो ?
–उहाँ (देउवा) ले मधेशका माग पुरा गर्छु भन्नुभयो । पहिला पनि मधेशका माग बारे आफू सकारात्मक रहेको, त्यसका लागि विगतमा प्रयास पनि गरेको अब पुनः त्यसका लागि काम गर्नेछु । आज हुने संसद बैठकमा मैले सम्बोधन पनि गर्छु पनि उहाँले भन्नुभएको थियो । त्यसपछि हाम्रो त्यही छुट्टै बैठक बस्यो र त्यो बैठकबाट देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्यौै । प्रधानमन्त्री देउवाले संसदमा आफ्नो जवाफ दिने क्रममा मधेशको माग बारे सम्बोधन गर्नुभएको थियो । त्यो सकारात्मक कुरा हो तर बोले अनुसार गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
अब तपाईहरु सरकारमा जानु हुन्छ नि ?
–सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन, पहिला पनि थिएन अहिले पनि छैन । हाम्रो माग पुरा नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौ भने कुरा पहिला पनि भनेका हौं आज पनि हामी त्यही भन्दैछौं । ओलीको सरकारको समयमा पनि हामीले मधेशको माग पुरा नभएसम्म हामी सरकारमा जाँदैनौै भनेका थियौं । मधेशका माग पुरा गरेपछि हामी सरकारमा गयौं । पछि अदालतले कतिपयलाई खारिज गर्दियो । अहिले पनि हामीले शेरबहादुर देउवालाई त्यही भनेका छौं, हाम्रो माग मुद्दा सम्बोधन भयो भने मात्र हामी सरकारको बारेमा कुरा गर्छौै ।
देउवासँग तपाई लामो समय काम गर्नुभएको छ, तपाईलाई के लाग्छ उहाँले मधेशको माग पुरा गर्नुहुन्छ ?
–हामीले विश्वास न गर्ने हो । अहिलेसम्म हामीले सबै प्रधानमन्त्रीसँग मधेशको माग बारेका कुरा गरेका छौं सबैले गर्छौ भन्नुभएको थियो तर कसैले गर्नुभएन र। देउवाजीलाई पनि हामीले पहिला हेरिसकेका छौं । यसपटक फेरि हेर्छौ किनभने हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । यो सरकारबाट केही गर्नुहुन्छ कि भने हाम्रो विश्वास छ ।
जसपा विभाजन भएको छ, तर विभाजित दुवै पक्षले देउवालाई समर्थन गरेका छन् अब पुनः एकता हुने सम्भावना कतिको छ त ?
–अहिलेसम्म जसपा विभाजन भएको छैन । जसपा अझै एकीकृत छ । निर्वाचन आयोगमा बहस चलिरहेको छ । त्यहाँबाट निर्णय आएपछि मात्र कसले आधिकारिकता पाउँछन् त्यसपछि मात्र दुईटा पार्टी बन्छ । पार्टीमा विवाद अवश्य छ । अझै केही विग्रेको छैन, आपसमा छलफल गरेर त्यसलाई मिलाउन सकिन्छ । कस्ता कस्ता विभाजित दलहरु आपसमा मिलेका छन् भने यो पार्टी अझै एकीकृत नै छ । त्यही भएर मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । महन्थ ठाकुरले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कार्यकारिणी समितिमा हेरफेर गर्नुभएको छ त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने भनिरहनु भएको छ भने उपेन्द्र यादवले पुरानै समितिलाई मान्यता दिनुपर्ने भनिरहनु भएको छ । विवाद त्यसैमा छ । त्यसको विषयमा बसेर छलफल गर्यो भने कुरा मिल्न सक्छ ।
Tags: #JSPNEPAL, #sharatsinghbhandari
प्रधानमन्त्री देउवालाई भारत भ्रमणको निम्तो